Ihe nko nwoke na nwanyi | Ndị nwoke mara mma
Kedu ihe jikọrọ nwoke na nwanyị
Alicia tomero | 24/05/2022 14:08 | Nlekọta onwe onye, Di na Nwunye na Mmekọahụ
Chọrọ ịma Kedu ka esi eme ka nwoke daa na nwanyi? Ọ bụ ezie na ọ dị mfe, e nwere ọtụtụ ndị inyom na-amaghị otú e si nọgide na-enwe mmekọrịta na mgbe ụfọdụ nke a na-eme ka ọ kpọọ nkụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe hooks nwoke si nwaanyị, anyị na-enye gị ụfọdụ isi Atụmatụ mere na agụụ ahụ na-aga n'ihu na-echekwa ọkụ.
Ọ bụrụ na ịmalite mmekọrịta, ị gaghị ekwe ka ọ daa na nchefu, ị ga-emerịrị mgbe niile debe usoro ahụ ma ghara ikwe ka ihe niile bụrụ ihe na-emekarị. N'ozuzu, ndị ikom na-ahọrọ ndị inyom na-atọ ụtọ, ndị nwere obiọma na ndị nwere nghọta.
1 Kedu ihe jikọrọ nwoke na nwanyị?
2 Kedu ihe ụmụ nwoke na-achọ na nwanyị?
2.2 Isi ísì
2.4 ọgụgụ isi na ihe ọmụma
2.5 obi ike onwe onye
2.6 nnwere onwe mmetụta uche na nke ego
2.7 Ọ na-amasị gị ime mkpebi nke gị
Kedu ihe jikọrọ nwoke na nwanyị?
Nkasi obi nke ịnọnyere onye ahụ na nnabata na-achịkwa ihe niile nwere ike ime nke abụọ. Nwoke na-enwere onwe ya ikwupụta mmetụta ya na ebe ha nwere ike ịkwado ya na ọbụna inye ihe karịrị otu ndụmọdụ bụ ihe na-amasị ha.
Nkọwa karịa ka enwere ike ịkọwapụta ga-abụ na onye mmekọ a kwesịrị ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, nkwanye ùgwù na, karịa ihe niile, nwee mmetụta ọchị. Nwanyị maara ka e si ege ntị, onye na-enwe mmasị mmekọahụ, onye maara esi esi nri na ọbụna onye na-ahụ maka ịhụnanya bụ nkọwa na-eme ka nwoke na-ejikọta nwanyị.
Kedu ihe ụmụ nwoke na-achọ na nwanyị?
El nwere ihe jikọrọ ma na-ekerịta otu ụtọ n'ihi na ndụ bụ okwu na-eme ka di na nwunye na-ejikọta ọnụ. Anyị ga-eleba anya na mkpịsị ugodi mmasị nwoke n'ebe nwanyị nọ na-arụ ọrụ nha anya n'ụzọ ọzọ na ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a. akụkụ ndị a na-eburu n'uche.
Obi abụọ adịghị ya, echiche mbụ bụ ihe dị mkpa, ma ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe efu, anyị agaghị eji echiche a duhie onwe anyị. Ndụmọdụ bụ gaa mara mma ma maa mma, ma pụta ìhè na njirimara atụmatụ nke ịma mma eke. Nwanyị nwere ike ọ gaghị adaba n'ime akwụkwọ ịma mma ma mara mma dị ka ndị ọzọ.
Isi ísì bụ ihe ọzọ na-ejikọta gị. na ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọ enwere ọtụtụ ihe na-esi ísì ụtọ nke dị ugbu a maka onye ọ bụla na iji otu dịka àgwà si dị bụ egwuregwu kachasị mma. N'aka nke ọzọ, e nwere ihe na-esi ísì ụtọ n'ime ahụ anyị bụ nke kachasị mma na nke kacha mma ka e cheta ya. Echefula ụlọ mposi dị mma ma mee ka ahụ gị na-esi ísì dị ọcha na nkọwa nke isi anụ ahụ gị.
Ọ bụ àgwà ọzọ dị n'azụ ndị a na-enyocha, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu uru. ụda na olu ha nwere ike ịpụ n'egwu na nke ahụ nwere ike igwu aghụghọ.
ọgụgụ isi na ihe ọmụma
Ihe onyonyo a na-eme ọtụtụ ihe ka nwoke nwee ike ịnya ya, mana enwere n'azụ ya ọgụgụ isi nke ụmụ nwanyị na ị ka nwere ike ijide ya karịa. ọ bụrụ na ọ dị mkpebi esemokwu na ha na-eme n'ụzọ ga-ekwe omume n'oge esemokwu, na-eme ka nwoke ahụ nọrọ.
obi ike onwe onye
Ọ dịghị ihe na-ekpuchi mmadụ karịa ịhụ ụzọ nwanyi nwere obi ike, n'egbughị oge, na-enweghị mkpebi na karịa ihe niile na-enweghị nchebe. Na ha maara ka ha ga-esi chee ndụ ihu na enweghị uche zuru oke na mkpebi siri ike.
Ọbụna izu oke nke onwe na-abata n'ime nchekwa a. Ọ bụrụ na nwanyị nwere ike dozie esemokwu mmetụta uche n'onwe ya na-enweghị enyemaka nke onye ọ bụla, ọ nwere ike ịmasị nwoke ahụ nke ukwuu.
nnwere onwe mmetụta uche na nke ego
Ndị nwere nnwere onwe mmetụta uche na-adọrọ mmasịHa ga-amara ka ha ga-esi kwe ka onwe ha chịkwaa nchekasị ahụ ma nwee nkà mmetụta uche iji chee ọnọdụ ọ bụla ihu. Anyị anaghị ekwu maka ime oyi na enweghị mmasị, mana gbasara nwee ọgụgụ isi mmetụta uche na inwe ike iwepụta oge nke esemokwu.
N'aka nke ọzọ, nnwere onwe akụ na ụba nwere ike ijikọ nwoke; ma ọ bụghị maka eziokwu dị mfe nke iji ihe ị nwere kpọrọ ihe, kama maka echiche ọ na-ebute n'onwe ya. Ihe ndị a niile ga-abụ ihe ndabere maka ụzọ ha nwere onwe na nke siri ike nke ịmara otu esi enweta nkwụsi ike.
Ọ na-amasị gị ime mkpebi nke gị
Ụmụ nwanyị nwere mmasị na nnwere onwe ha, ọtụtụ ndị ikom na-enwekwa mmasị. Ịkwanyere oghere nwoke ugwu dị mkpa. Enwela mmasị n'ịkọrọ ya ihe niile, ikekwe ị naghị enye ya obere ohere ahụ ọ chọrọ. Dị ka ihe atụ, mgbe nwoke si ọrụ lọta ma chọọ ịnọdụ ala ruo minit 30 iji zuru ike, ọ pụtara inye ya ohere ahụ.
Ya mere ọ dị mma inwe nnwere onwe zuru oke n'onwe ya Atụkwasịla ndị ọzọ aka ime mkpebi. Nkwado na-adị mma mgbe niile, mana ịkwesighi ịbanye n'omume nke ịdabere na mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Na nke kachasị, nwanyị dị ugbu a bụ onye na-agagharị mgbe niile na onye na-enwe mmasị na ọhụrụ bụ otu na ịdaba n'ịhụnanya. Bụrụ kpebisie ike ọ na-edozi nsogbu n'onwe ya, na-eme ihe mgbe niile ma na-anwa anwa ime ihe egwu. Ihe ndị a niile ọ bụ n'ezie ndị na-akpa nwoke?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Kedu ihe jikọrọ nwoke na nwanyị
Mgbe nwoke ahụghị gị n'anya, olee otú o si akpa àgwà?
Ihe mere ntutu ji eto n'azụ na otu esi ewepụ ha
Nweta ozi kachasị ọhụrụ na ejiji mmadụ na etu esi ebi ndụ na email gị.